Online Video များအား Free Download ချနိုင်သည့် Website များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Online Video များအား Free Download ချနိုင်သည့် Website များ
Online Video များအား Free Download ချနိုင်သည့် Website များ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 9, 2011 in Computers & Technology, Software & Links |7comments
YouTube, Google Video, DailyMotion စတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ တင်ထားတဲ့ video တွေကို download လုပ်ပေးတဲ့ website တွေကို ဖော်ပြ ပေးသွားပါမယ်။
Zamzar က ဗီဒီယို ဖိုင်တွေကို format convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အခြား ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုမှာရှိတဲ့ Video Link ကို ယူပြီး download လုပ်လို့ ရစေနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေကို convert, download လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း video တွေတင်မက audio, pdf, doc စတဲ့ ဖိုင်တွေကိုလည်း convert, download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Vixy.net ဟာလည်း Video ဖိုင်တွေကို format convert နဲ့ download လုပ်ပေးတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက ဖိုင်တွေကို convert လုပ်ပေးတဲ့ နေရာမှာ flash video/ flv file, YouTube ရဲ့ video တွေကို MPEG4, AVI, MOV, MP4, MP3, 3GP format တွေကို ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်တာပါပဲ။
KeepVid က ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်တဲ့ ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ KeepVid ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ web မှာ လူကြည့်အများဆုံး Video တွေကို ဖော်ပြထားပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
DVDVideoSoft မှာ youtube နဲ့ Google video တွေကို download လုပ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ free software တွေကိုလည်း ရနိုင်သလို video တွေကိုလည်း convert လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် audio, video တွေကို burn, rip, edit လုပ်နိုင်တဲ့ tool တွေကို ဒီဆိုက်မှာ ရနိုင်ပါတယ်။
ClipNabber က youtube, dailymotion, Veoh, Megavideo စတဲ့ video sharing ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း ၁၀၀ က ဗီဒီယိုတွေကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Read More at Anzartone.freezoka.net >>>
Post by Anzartone (http://anzartone.freezoka.net)
youtube တို့က မြန်မာမှာ ဖွင့်မရတော့ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါမလဲ။
အခု ကြည့်လို့ရနေပါပြီ မနောရေ .. ။
မမနောရေ အခု youtube က ရနေပြီလေ….
thanks par byo but where can i down zawgyi font ? (now new computer can`t allow to download) tell me pls if u know .
You can download Zawgyi under link
Zawgyi Website –
ဟုတ်တယ်နော်။ခုကအားလုံးနီးပါး ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပီ။ဒါပေမယ့် လိုင်းတွေထိုးကျနေပါတယ်။National bandwidth ကိုတိုးပေးဖို့ လိုပါတယ် လို့ မြင်မိတယ်လေ။
really thanks for your post i got it zaw gyi font